Soomaali dil iyo dhaawac loogu geystay Mareykanka - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Soomaali dil iyo dhaawac loogu geystay Mareykanka
Muwaadin Soomaali ah ayaa geeriyooday halka mid kale uu dhaawac culus soo gaaray,kadib dagaal kooban oo maanta ka dhacay Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkaasi Mareykanka.
Dagaalka ayaa yimid,kadib markii uu khilaaf soo kala dhex-galay dhalinyaro hubeysnaa oo Soomaali ah,kuwaas oo ku sugan Suuqa ama Mall-ka 24-ka halkaas oo ah Goob ay Soomaalida ku badan tahay.
Mid kamid ah Soomaalida ku nool Magaalada Minneapolis ayaa Risaala waxaa uu u sheegay in dhalinyarada Soomaalida ah ee dagaalamay ay Bustoolado ku hubeysnaayeen,sidoo kalena ay qeyb ka ahaayeen dagaalka dhalinyaro Mareykan ah oo baxsaday.
Ciidamada Booliska ka howlgalla Magaalada Minneapolis ayaa la sheegay in howlgal ay sameeyeen ay falkaasi dilka iyo dhaawaca ah ee dahlinyarada Soomaalida ah loo geystay inay u qabteen saddex Ruux oo lagu tuhmayo inay qeyb ka ahaayeen dagaalka.
Dagaalka sababay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ah ee Magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ku dhex-maray Dhalinyarada Soomaalida ah ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli qeybo kamid ah Magaaladaas laga dareemayo saameynta banaanbaxyadii rabshadaha watay ee ka dhacay.
Next articleWafdi horudhac u ah safarka Madaxweynaha Galmudug oo dhabad gaaray